Feno fahalovana | NewsMada
Tsy misy afa-tsy zava-doza no heno isan’andro raha ny vaovao eto Madagasikara. Voizin’ny haino aman-jery ary hita eny amin’ny fiarahamonina ny trangan-javatra mampihorin-koditra. Raha ny lazan’izany Madagasikara izany any amin’ny firenen-kafa dia toa mihosin-dra, maloto, mampatahotra, feno herisetra…
Tsy diso ny fiheveran’ny mpanara-baovao, tsy mahita maso fa maheno ny zava-doza lava miseho eto amintsika. Valifaty, fitifirana mpitsara ambony teo amin’ny lohany. Ra mandriaka vokatry ny lozam-pifamoivoizana nahafatesana olona… fanafihan-jiolahy ny tanàna iray manontolo ka lasa mitsoaka avokoa ny mponina ao. Fitsaram-bahoaka sy fandorana olona na fandrasarasana olona amin’ny famaky. Zary lasa efa mahazatra ny sofina ny mandre izany. Efa tsy mahataitra ny maso koa ny mijery ny habibiana toy ireny amin’ny faritra maro eto amintsika.
Manginy fotsiny anie ny halatra sy ny sinto-mahery miseholany eto Antananarivo sy amin’ny toeran-kafa. Horohoro sy fitaintainan’ireo mpiasa alim-pody noho ny fitadiavana. Tsy mandry andro tsy mandry alina amin’ny tsy fandriampahalemana….
Na ireo mpanefoefo aza mitaintaina amin’ny fisian’ny mpanao takalon’aina izay tsy matahotra ny mpitandro filaminana intsony.
Tsy maintsy ahenoana vaovao ratsy isan’andro eto amin’ity Madagasikara ity. Ankoatra ny tsy fandriampahalemana miseho amin’ny fiarahamonina, ahatarafana ny tsy filaminana eto Madagasikara koa ny adilahy politika sy ny fofompofona korontana hafahafa kasain’ny sasany hatao.
Raha ireo rehetra ireo, tsy mahaliana ny vahiny i Madagasikara fa hotohoton’ny faharatsiana sy ny fahalovana tanteraka. Potika ny toe-tsaina ary latsaka anaty lavaka ny firenena.
Takona ao ambadik’ireo faharatsiana marobe ireo ny hakanton’ny zavaboary sy ny sombintsombiny tsara misy eto amintsika.
Une réponse à "Feno fahalovana"
Louis 22/04/2018 à 17:33
Efa 31taona zao no ipetrahako apitndrsina.Mamaky ny vao2 @ intrnet gasy aho fa tena mampihorokoditra tokoa reo voalaznao reo. Aiza fa tena mamoa fady sy heloka be eo antrehan’Atra tokoa h@ halatra taolapaty.Fa zaho aza tena matahotra mody eto Dago satria fatatrolona fa avy andafy aho,ary tena jonoa’ny panao ratsy. Fa zao no tiako holazaina:”NY TRONDRO HOA LOA AVY @LOANY”.Ka npitondra mihitsy no diso satria tsy mahefa ny asany ny pitandro filaminana.Azon’ny crise daholo anie ny eratany e!Fa tsyazo ao ny hampijaly ny olona!